Best Routes Ukuqeqesha European | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Best Routes Ukuqeqesha European
Best Routes Ukuqeqesha European
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo eNorway, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 01/04/2021)
Xa usuke abanamava le intuthuzelo, lula, kwaye ngokumangalisayo ngokubanzi kukaloliwe, ukuba imbuyekezo nzima ebomini pre-kaloliwe. Ingakumbi xa uthetha malunga iindlela Best uloliwe yaseYurophu ehlotyeni. Ilizwekazi igcwele imizila ebukekayo, imihlaba emangalisayo, kunye nentsalela engakholelekiyo oya kuyo ukuba gawk e.
umdla Train yeyona nto intle kwaye ukhululekile indlela ukuhambahamba eYurophu, kwaye kukho ezinye iindlela eziya ngokwenene kuvuthela ingqondo yakho, ingakumbi phakathi Summer!
Best imizila kaloliwe European: Qeqesha des Pignes, Fransi
I Eurostar kunye nezinye uloliwe imigca baqalise iinkonzo lwaqho. and iihotele iindwendwe wamkelekile ngesantya off-peak. Kukho iintsuku ezizukileyo sunny xa unokuba isiselo nkqu isidlo ngaphandle.
Ukuyityhila le kaloliwe yabucala, ukuba idlule ezintle kakhulu imimandla e France. Provence idume lwendalo kunye nenkangeleko entle, uhambo ngokwenene asiyongcamango ilungileyo, yaye ngokuqinisekileyo enye iindlela Best uloliwe European ukuba! On its way, i Isitimela kudlula imilambo, imizila, iilali ezincinci ezintle njenge-St Andre les Alpes kunye ne-Entrevaux kude kube yindawo yayo yokugqibela-iDigne les Bains - ikomkhulu lommandla weAlpes-de-Haute-Provence.
Ubude: 3 iiyure, 145 km
Nini ukuya: spring, ihlobo, bawe
Best imizila kaloliwe European: I-West iRhine Railway, Jemani
I-iRhine yenye imilambo ezintle Europe kungekuphela, kodwa ke kwakhona omnye imijelo yamanzi ibalulekileyo yelizwekazi. Ayajika ezinye 1,320 kilometres Swizalend yonke indlela eya eNetherlands kunye Sea North. Esinye sezigaba zinomtsalane le mfula omkhulu aqukuqela Middle iRhine Valley Jamani (Rheintal), indawo ubuhle obalaseleyo bemvelo. Inyaniso, Kumgama lomlambo osusela Mannheim kwi ezantsi Koblenz emantla uqhayisayo ubuhle bendalo kangangokuba inxalenye enkulu, obizwa ngokuba iRhine Gorge (Rheinschlucht), uye wabizwa a UNESCO World Heritage Site.
Ngenxa abaninzi yayo iinqaba needolophu ezisembalini, le omde iRhine analo amagcisa eminyaka nefuthe, ababhali, futhi abaqambi, yaye ngokuqinisekileyo enye iindlela Best uloliwe yaseYurophu ngexesha lonyaka ihlobo.
Uloliwe uhamba ecaleni komlambo iRhini kwaye utyhila iindawo ezintle waseJamani. Kumathambeka onamatye izidiliya, iinqaba endala phezu kwabo - ungafumana off kuloliwe aze utyelelo i Lorelei rock yayaziwa St. Goarshausen, ezinyukayo 120 m ngaphezu iRhine. A umzila lihle, xa uhamba kwezi zixeko German elihle.
Ubude: 185 km
Nini ukuya: ihlobo, bawe
Cologne ku Bonn Uqeqesha
Bonn ku Koblenz Uqeqesha
Koblenz ku Bingen Uqeqesha
Bingen ku Frankfurt Uqeqesha
I Rauma Railway, Norowe
I Rauma Railway uba ngakumbi zithandwa phakathi abakhenkethi, njengoko kubafaneleyo enye kwiindlela Best uloliwe yaseYurophu entwasahlobo. Uhambo kule kaloliwe wakungenisa kufutshane ubume bendalo phakathi Andalsnes ne Dombas.
Le hambo phakathi Dombas ne Andalsnes yi 114 km ubude kwaye kuthatha 1 iri 40 imizuzu. Lo loliwe kudlula 32 imizila – kuquka edume Kylling Bridge, 59 neemitha ngaphezu Rauma umlambo – udlula nge 6 imigudu. Lo loliwe enefestile ezinkulu, ukuvumela ukuba ndayame umva onwabele ubuhle omangalisayo. Kwakhona Uloliwe uya elidlulileyo edume Trollveggen – udonga isosha, ephezulu udonga ezintabeni aa Incopho eYurophu.
Spring elona xesha lifanelekileyo ukuqala ukuya. Lo loliwe ihamba kade ingakumbi kwanobuhle. Ime ukuba imifanekiso Kylling Bridge kunye eludongeni badla, uya kukunika ulwazi ngokusebenzisa izithethi isikhokelo, kwaye kwakhona uya kufumana incwadana ulwazi malunga iimbalasane yohambo.
Ubude: 1.5 iiyure, 114 km
Nini ukuya: Summer
Bernina Express, Switzerland ku Italy
Ukuwela Alps kwi Bernina Express ngokuqinisekileyo yenye iindlela Best uloliwe yaseYurophu ukutyelela eYurophu! Apha endleleni, I-Bernina Express iqengqa isitayile saseHollywood ngaphezulu kweemitha ezingama-65 eziphakamileyo zeLandwasser Viaduct, ulwakhiwo lokusayina lweRhaetian Railway, kunye ne-UNESCO yeLifa leMveli.
Bebonke uloliwe peni 55 imigudu naphezu 196 iibhulorho isendleleni yayo ukusuka Chur ukuya Tirano. Abahambi zinyangwa ukuba izinto ezimangalisayo phakathi kwabo uhambo, efana kwigophe Montebello ngenjongo le Bernina massif, i Morteratsch glacier, ezintathu amachibi lej Pitschen, Lej nair, kunye noLago Bianco, iAlp Grum, kunye neBrusio Circular Viaduct. Ehlotyeni, uhambo kunokongezwa ukusuka Tirano ukuya Lugano ababe- Bernina Express Bus.
Ubude: 4 iiyure, 123 km
Chur ku Thusis Uqeqesha
Zurich ku Chur Uqeqesha
EGeneva ku Chur Uqeqesha
EMilan ukuya Tirano Uqeqesha
Ukulungele ukuba benze kwiindlela Best uloliwe European? Gcina A Isitimela kunokukunceda, yezohambo ekhawulezayo lula nge NO iimali ezifihlakeleyo! Yintoni kamnandi!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-train-routes%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#scenictravel europetravel longtrainjourneys Iholide zehlobo tips uloliwe
4 Iindawo Underrated EYurophu onokulufikelela By Train
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland
10 Free Izinto To Do In Paris
Best uphahla zokutyela Kwaye zokudla EYurophu
Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSpain, Travel Europe